Ester 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
5 Na da a ɛto so abiɛsa no,+ Ester hyɛɛ n’ahemmaa atade+ na okogyinaa ahemfie no adiwo,+ beae a ɛne ahemfie no di nhwɛanim. Saa bere no na ɔhene no te n’agua so a n’anim hwɛ ofie no pon ano. 2 Afei bere a ɔhene no huu ɔhemmaa Ester sɛ ogyina adiwo hɔ ara pɛ, onyaa n’anim dom,+ enti ɔhene no teɛɛ sika poma+ a okura no wɔ Ester so. Ester twiw bɛnee, na ɔde ne nsa kaa poma no ti. 3 Ɛnna ɔhene no bisaa no sɛ: “Dɛn asɛm, Ɔhemmaa Ester? Dɛn na wuhia?+ Sɛ m’ahenni no mu fã mpo a,+ mede bɛma wo!” 4 Ɛnna Ester kae sɛ: “Sɛ ɔhene bɛpene so a, anka ɔhene ne Haman+ mmra pon+ a meretow ama no nnɛ no ase.” 5 Na ɔhene kae sɛ: “Monhwɛ mma Haman mmra ntɛm+ sɛnea Ester aka no.” Ɛnna ɔhene no ne Haman baa pon a Ester towee no ase. 6 Bere a wɔwɔ nsa apontow no ase no, ɔhene no bisaa Ester sɛ: “W’abisade ne dɛn+ na wɔnyɛ mma wo? Dɛn na wuhia? Sɛ m’ahenni no mu fã mpo a, mede bɛma wo!” 7 Ɛnna Ester buae sɛ: “Nea mesrɛ na mihia ne sɛ, 8 Sɛ manya ɔhene anim+ dom na ɔhene bɛpene so ayɛ nea mesrɛ na mihia ama me a, anka ɔhene ne Haman mmra pon a mɛtow ama wɔn ɔkyena no ase, na ɔkyena mɛyɛ nea ɔhene aka no.”+ 9 Saa da no bere a Haman fii adi no, na n’ani agye+ ma ne koma atɔ ne yam. Nanso bere a ohuu Mordekai wɔ ɔhene pon ano+ hɔ a wansɔre+ na ne ho ampopo mpo no,+ Haman bo fuwii.+ 10 Nanso Haman hyɛɛ ne ho so na ɔkɔɔ ne fie. Afei ɔsoma kɔfrɛɛ ne nnamfonom ne ne yere Seres+ bae; 11 na Haman kaa n’anuonyam ne n’ahode+ ne ne mma+ dodow ne biribiara a ɔhene de ahyɛ no anuonyam ho asɛm kyerɛɛ wɔn, sɛnea ɔhene ama no so asen mmapɔmma ne ɔhene nkoa a wɔwɔ hɔ nyinaa no.+ 12 Afei Haman toaa so kae sɛ: “Nea ɛsen saa mpo no, Ɔhemmaa Ester tow pon maa ɔhene, na wamfrɛ obiara amma hɔ gye me nkutoo,+ na wasan ato nsa afrɛ me ne ɔhene sɛ yɛmmra ɔkyena+ nso. 13 Nanso eyinom nyinaa mma me bo nnwo, bere dodow a mihu Yudani Mordekai sɛ ɔte ɔhene pon ano no.” 14 Ɛnna ne yere Seres ne ne nnamfo nyinaa ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma wɔnyɛ dua+ a ne tenten yɛ basafa aduonum, na anɔpa+ ka kyerɛ ɔhene sɛ wɔnsɛn Mordekai wɔ so.+ Afei wo ne ɔhene nkɔ apontow no ase anigye mu.” Asɛm no yɛɛ Haman dɛ+ na ɔma wɔyɛɛ dua no.+